Calvary Chapel Modesto Inosimudza Dzimba Rokuchengetedza, Kuvandudzirwa Kubudiswa Pix BPswitch Inoshandiswa Mukugadzira Switcher - NAB Kuratidza Nhau neChirwere Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Ratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE
musha » nhau » Calvary Chapel Modesto Inosimudza Dzimba Rokuchengetedza, Kuvandudza Kubudiswa Pix BPswitch Integrated Production Switcher
Calvary Chapel Modesto Inosimudza Dzimba Rokuchengetedza, Kuvandudza Kubudiswa Pix BPswitch Integrated Production Switcher
Chelmsford, Mass. - Nov. 8, 2018 - Apo Calvary Chapel Modesto akatamisa nzvimbo yavo yekudzivirira munaSeptember, zvakatora mukana wekuisa itsva Broadcast Pix ™ BPswitch ™ MX yakagadzirwa kubudisa switcher. Ichechi imwe chete inoita kuti ini MAG (kukudzwa kwechifananidzo) kugoverwa kwebasa rayo yeungano pamwe nehuwandu-kamera kugoverwa kwehupenyu hunobuda.
Kubva muModesto, Calif., Calvary Chapel ichechi isiri yechitendero ine vanhu vanopfuura 3,500. Kubva pane imwe 17-acre campus ne 50,000 makumbo makumbo ezvivako, kereke inopa husiku husiku husiku nevhiki. Masikati ayo eSvondo neChitatu anotumidzwa ari mupenyu, uye maSvondo ayo anowanzosvitsa 1,800 vatariri vanobva kumativi ose enyika.
Kwemakore, boka rezvipiri rokuzvipira rakashanda muchechi yepamusoro muchechi mune imwe nzvimbo yekamuri newindo rimwe chete raiisa maonero eimba tsvene. Dave Abbey, mutungamiri wepepanhau, akati kusungirirwa kwakashanda zvakanaka kwekanguva, asi pakupedzisira maikirwoti nemavhidhiyo anotamba akatsika pasi. Apo kereke yakafambisa boka rose rekugadzira pasi pasi pegore rino, rakasarudza kuvandudza Granite ™ yakagadzirwa shanduko yekuchinja uye zvimwe zvigadzirwa zvekugadzira. Calvary Chapel yakabvumirana naBrad C. Shields uye Associates muModesto kuitira kubatanidza zvachose.
Kufanana neGranite, itsva switcher inoda kukwanisa kudzora vatatu Sony PTZ makamera akaiswa pamadziro kumashure kweimba tsvene, pamwe nekubudisa zvirongwa zviviri panguva imwe chete. Kunyange ini I MAG mukugadzira hakusi kunyanya kamera kamakanganiswa nemashoko kubva kuMuMuenzaniso, kushambadzira kwekutsvaga kunoshandisa makamera ose matatu neCG pamusoro pezvimwewo nezvimwe zvinhu.
BPswitch's PowerAux yakawanikwa yakapa hutsika Abbey inoda, uye kereke yakakwanisa kuchengetedza mari kuburikidza nekushandisa zvakare ganiti yekudzora jira. "Zvakanga zvakakosha kwandiri kuti tive nechiitiko che 2 M / E pasina mari ye2 M / E switcher," akadaro. "Inoshanda zvakanaka, tinonyatsoda."
Inzvimbo itsva yekudzora yakafanana nehombodo yakakombwa nemadziro mashoma. "Muzvigadzirwa zvakararama, iwe kazhinji unoda kusununguka, asi kwatiri isu zvisiri izvo," Abbey akatsanangura. "Iye zvino tine tese techs matatu muimba imwechete, saka kukurukurirana zviri nani. Iko kusiyana kweusiku neusiku. "
Kunze kwebasa nguva dzose, BPswitch yakavandudzawo basa rekuita zviyeuchidzo, izvo zvakange zvichinyanya kukanganisa kwekambani yekugadzira mavhidhiyo. Inenge imwe yese yekuyeuchidza ushumiri inosanganisira vhidhiyo, uye Abbey inogamuchira zvinyorwa mumhando dzakasiyana-siyana dzefaira. NeBPswitch itsva, Calvary Chapel inoshandisa yakaiswa muBPNet ™ cloud-based media management system. Abbey vanotumira chibatanidza apo varongi vanogona kuisa vhidhiyo yavo. Zvadaro, vhidhiyo yacho inoshandurudzwa uye inowanikwa kuti ichitwe paBPswitch.
Zvimwe zvekugadzirisa nzvimbo yekugadziriswa zvakasanganisira mbiri dzakagadzirwa 27-inch vatariri, uyewo itsva Soundcraft digital audio mixer uye Dante digital Audio network. Calvary Chapel yakawedzerawo chekudzivirira chekrini muimba yekudzivirira, uye shandisa Broadcast Pix Commander ™ kushandiswa kwemashandisi ekushandura I MAG mharidzo yeimba tsvene.
Nechisimbiso chakashandurwa switcher uye 3D motion graphics CG, Broadcast Pix inopa zvakanyatsobatanidzwa mavhidhiyo mavhidhiyo ekugadzirwa kwekodzero nekodzero yepamusoro yekudzidzira uye automation teknolojia. Kubva pamakwikwi akabatana kusvika kumahombekombe makuru, ma-multi-system solutions, kila Broadcast Pix ine shanduro yakawanda ye toolset inoita kuti zvive nyore kujekesa uye kuisa basa rako riri mukati mako nepamusoro pePI. Uyezve, zvisikwa zveBPNet zvinopa gore rakachengeteka mabasa nemafambisirwo emari. Yakatangwa mu2002, Broadcast Pix ine vatengi mune dzimwe nyika ye100 uye ndiye mutungamiri mukuzara zvakakwana kushandiswa switchers kwehurumende, kuparidzirwa, kuparidzika, chiitiko chinorarama, uye mavarai eredhiyo. Dzidza zvakawanda pa Www.broadcastpix.com.
Broadcast Pix, Broadcast Pix Commander, BPNet, BPswitch, uye Granite zviziviso zve Broadcast Pix, Inc. Mvumo yepamutemo. Shanduro dzinoitwa muU.SA.
Mifananidzo yakapedzisira nePipeline Communications (ona zvose)
KUNA-America Inotora Mukurumbira Wakatarisa paWFX Expo - November 12, 2018
Calvary Chapel Modesto Inosimudza Dzimba Rokuchengetedza, Kuvandudza Kubudiswa Pix BPswitch Integrated Production Switcher - November 8, 2018
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Broadcast Pix kusangana Production switcher Spears & Arrows Streaming Video Engineer namata	2018-11-08
Previous: Technicolor PostWorks 'Ben Murray Kutungamirira Panel Panharaunda kuDOC NYC
Zvadaro: Kusimuka Sun Pictures Dzidzo: Joannah Anderson Hurukuro
Hey Buddy !, Ndakawana ruzivo urwu kwauri: "Calvary Chapel Modesto Inofamba Dzimba Rokuchengetedza, Kuvandudza Kubudiswa Pix BPswitch Integrated Production Switcher". Heino chibvumirano chewebsite: https://www.broadcastbeat.com/calvary-chapel-modesto-moves-control-room-upgrades-to-broadcast-pix-bpswitch-integrated-production-switcher/. Ndatenda.